रुखमा पुरुषको श’व देखेपछि खबर दिन घरमा गए गाउँले, घरमा पनि श्रीमती र चार सन्तानको श’व – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. रुखमा पुरुषको श’व देखेपछि खबर दिन घरमा गए गाउँले, घरमा पनि श्रीमती र चार सन्तानको श’व – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
रुखमा पुरुषको श’व देखेपछि खबर दिन घरमा गए गाउँले, घरमा पनि श्रीमती र चार सन्तानको श’व
एजेन्सी । श्रीमान श्रीमतीबीच भएको सामान्य विवाद पछि एक ब्यक्तिले आफ्ना ४ छोराछोरी र श्रीमतीको ज्या न लि ‘ए’र आफुले पनि देह त्याग गरेका छन् । यो भारतको उदयपुरमा भएको घटना हो । मृ त्यु हुनेमा दुई छोरा, दुई छोरी र श्रीमती छन् । चार जनाको मृ त्यु भए पछि ति युवकले पनि देह त्याग गरेका हुन् ।
उदयपुरको खेरवारा थाना क्षेत्रको रोबिया गाउँमा बस्ने यि पुरुष रुखमा झु’ण्डि’एको देखेपछि स्थानियले प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरीले शुक्रबार राती अबेर भएको यो घटनाको सूचना प्राप्त पायो । सूचना पाएपछि उच्च प्रहरी अधिकारीहरू घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान थाले ।
प्रारम्भिक सूचनाको आधारमा पछिल्लो कुरा थाहा भयो कि श्रीमान् र श्रीमतीको बीचमा रातभरि कुनै कुराको बारेमा विवाद भएको थियो ।
रोबिया गाउँका मानिसहरूले रूखमा झु’ण्डि’एको पुरुषको श’व देखेपछि उनको घर पुगेका थिए । घटनाको जानकारी दिन घरमा पुग्दा बाहिरवाट साँचो लगाएको थियो । तर घर बाहिर सुकेको र’ग’तको संकेत थियो। गाउँलेहरूले यसबारे पुलिसलाई जानकारी गराए।
जब पुलिस घटनास्थलमा पुगे र घरभित्र पसे त्यहाँ दृश्य अचम्मलाग्दो थियो। घरमा युवकको श्रीमती र चार निर्दोष बच्चाहरूको र’ग’त बगिरहेको थियो।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको December 27, 2020 December 27, 2020 395 Viewed